Taariikhda iyo qoomamoyinka DesdeLinux ee martigelinta iyo VPS | Laga soo bilaabo Linux
Taariikhda iyo qoomamada DesdeLinux oo leh marti gelin iyo VPS
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Laga soo bilaabo Linux
Adduunkan waxba ama ku dhowaad waxba ma aha lacag la'aan, haysashada degel websaydhkuna waa lacag, maaddaama ay tahay inaad iibsato (oo aad dayactirto) bogga, sidoo kale waxaad u baahan tahay marti-gelin ama adeeg-bixiye meesha ay ku yaalliin goobta ama boggu.
Markay degel u baahan tahay oo ay ku tiirsan tahay xog uruurinta nooca MySQL ee hawlgalkeeda, marka barta aan si buuxda wax looga qaban, laakiin ka sarreeysa dhammaanteed ... markay degelku caan ku yahay (ama ugu yaraan ay helaan tiro badan oo booqasho ah) waxay noqon kartaa loo beddelay dhibaato loogu talagalay bixiyeyaasha martigelinta, sababtoo ah goobta ayaa ku adeegsan karta ilo aad u tiro badan.
Maqaalkii hore ee aan ku sheegay inaanu tijaabinayno GnuTransfer VPS dhowr isticmaale (Bruno y Jose Torres) waxay i weydiisteen inaan la wadaago khibradaha aan la wadaagnay bixiyeyaasha VPS (sidoo kale waxaan u maleynayaa in martigelinta), sidaa darteed ... halkan waxaan u ahay taas, si aan ugu sharraxo qaybo ka mid ah sida ay khadka tooska ah ugu sii jirtay illaa iyo hadda tan iyoLainL 😀
Aan ku sharaxno qaybo ka mid ah sidaan halkan ku soo galnay 😉
1 1. Ku martigelinta SlickWebHost:
2 2. Ku martigelinta A2Hosting:
3 3 (a). VPS leh AlvoTech:
4 3 (b). Ku martigelinta Hostgator:
5 4. VPS oo leh GnuTransfer:
1. Ku martigelinta SlickWebHost:
Markii aan ku bilownay DesdeLinux in yar ka yar laba sano ka hor tani waxay ahayd uun fikrad, degel fudud (blog) halkaas oo elav iyo waxaan ku fikiray inaan la wadaago khibradaha iyo aqoonta. Waqtigaas waxaan awoodnay inaan iibsanno domainka iyo sidoo kale hal bil oo martigelin ah SlickWebHost.com
Marti gelintooda iyaga sifiican uma xasuusto sida ay tayada u ahayd, laakiin waxaan xasuustaa in waqtigaas aan u qaatay inay aad qaali u tahay, maadaama aysan ahayn iibiye jaban.
Ma aannu joogin halkaas wax ka yar, bil ka yar.
2. Ku martigelinta A2Hosting:
Raadinta martigelin ka wanaagsan tii hore, waxaan LiveChat kula hadlay dhowr bixiyeyaal marti-geliya oo qiimo jaban xilligaas lahaa, mid gaar ah ayaa soo jiitay dareenkeyga maxaa yeelay inbadan ayaa ku sifeeyay inay tahay "shirkad jilayaal ah", tani waxay ahayd A2Hosting.com . Waxaan la hadlay xoogaa wadahadal ah iyada oo loo marayo LiveChat wayna igu qanciyeen, waxay bixiyeen martigalin wanaagsan oo muuqata iyo sidoo kale tasiilaad sida CPanel iyo Softaculus
En Nofeembar 2011 , Waqti badan kuma qaadan A4Hosting inay noo soo dirto emayl noo sheegaya in annaga (balooggu) isticmaalnay ilo aad u tiro badan, oo aan ku qasbanaanay inaan u cusbooneysiino qorshe sare (oo ay kujirto bixinta lacag badan), tan sida iska cad nama jeclayn mid. xoogaa sidaa darteed mahadsanid deeqaha saaxiibbada dhowr ah, waan awoodnay ku iibso Martiqaad Hostgator.
3 (a). VPS leh AlvoTech:
Deeqaha aan helnay waxaan sidoo kale awoodnay inaan ku iibsanno VPS Alvotech.de, shirkad Jarmal ah oo iibisa VPS (server sahal). Waxaan isku daynay markii ugu horeysay inaan dhigno blog-ka halkaas, laakiin nasiib daro suurtagal ma ahayn, waqtigaas balooggu wuxuu cunaayay ilo aad u tiro badan maxaa yeelay si aad u liidan ayaa loo habeeyay, VPS xitaa ma fogeyn karto xamuulka uu soo saari doono balooggu.
Taa baddalkeeda, waxaan go'aansanay inaan adeegyo kale ku dhex dhigno VPS-ka sida Forum, Paste, IRC, FTP, MailServer, iyo waxyaabo kale.
In kasta oo VPS ay soo bandhigto dhibaato kale waqti ka waqti, haddana waa wax la yaab leh maxaa yeelay guud ahaan adeegga Alvotech runti wuu deggan yahay, hase yeeshee dib u bilaabista VPS ayaa xallisa.
By the way… VPS way lashaqeeyaan Debian waxayna ku taal Düsseldorf, Jarmalka 😉
3 (b). Ku martigelinta Hostgator:
Mar haddii balooggu ku yaal Hostgator waxwalba sifiican ayey usocdeen markii hore. Marka loo eego bixiyeyaashii hore Hostgator shaki la'aan waxay ka sarreysay waqtigaas, goobtu si habsami leh ayey u socotaa, waxay ahayd buggy, wax qarsoodi ah ma ahayn waqtigaas (xitaa hadda) Hostgator waa mid ka mid ah bixiyeyaasha martigelinta ugu fiican.
Dhibaatadu waxay timid waqti kadib, booqashooyin badan oo aan yeelanay, inbadan oo aqristayaal ah ayaan helnay, sidaan caan u nahay ayaan noqonay, dhibaatooyinka badan ee aan kusoo bandhignay Hostgator.
Mar labaad bay ahayd, dhibaato la mid ah sidii had iyo jeer ahayd, waxaan helnay booqashooyin aad u tiro badan, waxaan soo saarnay hawl aad u badan, waxaan culeys ka saarnay server-kii uu yaallay koontadayada martigelinta, sidaas darteed ... markale khaladaadkii dhibka badnaa ayaa soo noqday: «Khalad 500 Server Gudaha ah«.
4. VPS oo leh GnuTransfer:
Wiilasha GnuTransfer (Javier si gaar ah) wuxuu u lahaa naxariis iyo xushmad inuu ii soo diro kuuboon si aan u tijaabiyo VPS muddo bil ah gebi ahaanba bilaash, in kasta oo aan weli ku jirno muddadaas tijaabada ah ... waxay horeyba noogu qanciyeen inaan la iibsanno iyaga (sababo badan, aniga ayaa faallo ka bixin doona qoraal kale).
Maanta balooggu wuxuu ku yaalaa VPS of GnuTransfer, illaa iyo hadda wax dhibaato ah ma qabno, degelku wuxuu u shaqeeyaa sida ugu dhakhsaha badan weligiis ... ma jiraan wax khaladaad ah, cilad la'aan, layaab.
Waxaan ka hadli doonaa maqaal kale si gaar ah oo ku saabsan GnuTransfer iyo adeegyadeeda maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo badan oo laga hadlayo oo sharraxan xilligan waxaan dhihi doonaa oo keliya VPS wuxuu la shaqeeyaa Debian (Wheezy), adoo adeegsanaya Nginx+ MySQL + PHP5 + APC, runtii wax walba waa la hagaajiyay, ilaa laga gaaro in qiyaastii 60 isticmaale oo khadka tooska ah isticmaala RAM uusan ka badneyn 390MB ... runti, cajiib 😀
Daqiiqadani waxaan leenahay qorshe xen-02048 Oo waxay nooshaqeysaa waxyaabo yaab leh, laakiin ... waa hagaag, qoraal kale waxaan kuugu sheegi doonaa warka, maxaa yeelay uma qorsheynayno inaan la sii joogno qorshahan oo keliya 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Laga soo bilaabo Linux » Taariikhda iyo qoomamada DesdeLinux oo leh marti gelin iyo VPS
Gawaarida xad dhaafka ah aad ayey ugufiican yihiin inaad ogtahay inaad dad badan lasocto laakiin ay xuntahay maxaa yeelay waxay kugu qasbeysaa inaad hesho ilo fiican. Hadday ku jirto VPS-ka meesha ay tani ka bixiso dhibaatooyinka, waxaa jira shirkad Isbaanish VPS Cloud ah oo aad u fiican oo aan kugula taliyo, waxaa loo yaqaan Gigabytes, waxaad haysataa laba bilood oo bilaash ah iyo dammaanad qancin ama lacag celin, waan joogaa ilaa iyo hadana wax dhib ah ma siinin (7 bilood) marka laga hadlayo soo degsashada codsiyada, iskuday inaad isticmaasho Cloudflare, wax badan ayey ka caawisaa, xitaa nooca bilaashka ah.
Waxaan rajeynayaa inay wax walba hagaagaan, bulshada ayaa sii socota.
Waxay u baahan yihiin inay dhigaan Debian Wheezy (iyo GNUTransfer horeyba way uga garaaceen arrintaas).
Haa, waxaan qorsheyneynaa inaan adeegsanno CloudFlare (nooca bilaashka ah), weli waa inaan si habboon u qaabeynaa.
Duqa magaalada Alexander dijo
Boggeyga waxaan ku isticmaalayaa Nginx + MySQL + PHP5 + module-ka google page_speed, waa inaad isku daydaa.
Jawaab Alejandro Alcalde
Kaliya xiisaha darteed, waa maxay martigelinta aad isticmaasho?
Server u heellan ugxanta, tan ugu aasaasiga ah gaar ahaan KS 2G. Farxad
OVH ma xuma. Kaliya waxay leedahay 2 cillado. Taageerada ayaa sumcad ku leh null, taasi waa, waa inaad wada karisaa. Laakiin waxaan u maleynayaa in taasi aysan dhibaato aheyn sababtoo ah nimankan ayaa duuliya ukunta. Ha la dhigin wax domain muhiim ah iyaga oo mararka qaar aan akhristo dhibaatooyinka. Aniguna 3 waan haystaa iyaga ... laakiin mid muhiim ah waxaan 100% ku haystaa Spain (domainka) oo aan bixiyo 14 euro sanadkii sanadkii .com, haddii aan ku wargeliyo shirkad waxaan doorbidaa inay Spain joogto.
Intaas aan ahayn. Xogta cusub ee Mareykanka, ka fiiri mishiinnada iyo qiimahee:
Laakiin haddii GNUT gudbinta ay sifiican u socoto oo ay dareemaan raaxo, taasi waa waxa muhiimka ah. OVH ma taageeri doonto, waxaan kuu sheegi doonaa wixii hada ka dambeeya.
Waa run waxa aad ka leedahay taageerada, laakiin waxay iga caawisay inaan wax badan ka barto maamulka serverka, raadinta google waxaad ka heli doontaa wax walba dhamaadka.
Xitaa waxaan ku guuleystey inaan gacan ku habeeyo DNS-ka anigoo tifaftiraya faylasha isku xirka
Waxa ugu wanaagsan ee shirkadani tahay inay aad u jaban yihiin, waxaan bixinayaa 142 euro sanadkii.
Xagga domainka iyaga oo aanan haysan, waxaan ku iibsaday .com $ 12 markii aan lahaa baloogyada lagu martigaliyo blogger-ka oo ay sifiican iyaga ula socdaan.
Laakiin waxaad dhahdo, haddii ay si fiican u shaqeeyaan hadda, waa hagaag.
Dynkeena gaarka ah (bind9) waa wax aan rabo inaan sameeyo, laakiin elav wuxuu kugula talinayaa inaanan fiicneyn hehe ..
Taageerada farsamo maahan inay tahay wax deg deg ah, waxbadanna kayar, labadaba iyo waxaan maareeyay shabakado iyo server sanado badan, mana ahan inaan ka baqeyno terminal ama daemons 🙂
Haddii aad xiiseyneyso, waxaan qoray 3 maqaal oo sharraxaya habka loo qaabeynayo server-ka DNS gacanta Debian, ila soo socodsii oo waxaan kuu soo diri doonaa xiriirka (Ma ahan spam.)
Haa ha walwelin, bind9 runtii waa takhasus gaar ah elav !!
Sida halkan waxaan ku qoreynaa nidaam faahfaahsan oo ku saabsan https://blog.desdelinux.net/tag/bind9
Laakiin ... sinnaba, elav waxay i weydiineysaa inaan uga tago DNS-ga gacmaha qof kale (sida NameCheap tusaale ahaan).
By habka, maalintii kale waxaan tijaabinayay nsd3 ... aad u xiiso badan sida ay u abuurto a .db iyo sidoo kale hubiyaa goobaha ka hor intaadan bilaabin daemon, fiiri oo waad ii sheegi doontaa 🙂
Waxaan doorbidayaa in adeegga DNS ay bixiso shirkad u heellan iyada. Way ka ammaan badan tahay. U_U
PageSpeed ​​wuxuu na siiyay dhibaatooyin ... wax imminka aanan xasuusnayn, waa inaan ku tijaabiyaa adeegaan si aan u arko sida ay u shaqeyso.
Inta hartay, waa waxa aan isticmaaleyno 😀
Waa maxay qalabka kaydka ah ee aad ku isticmaasho halkan?
Waxaan qiyaasayaa inay tahay w3 wadarta-kayd ama wp-super-cache. Maya Alejo?
WP ma laha waxyaabo badan oo dheeri ah taas, si kastaba ha noqotee, waxaad si fiican u ogtahay in WP leh ama aan lahayn kayd ay tahay wax nacasnimo leh isku xirnaanta isku mid ah.
Haa, waa W3 Total Cache.
calool xanuun dijo
Ma aqaano hadii aan ahay qofka kaliya ee dhaca, laakiin labada ipad iyo iphone labadaba, markaan furo boostada ku taal boggan arjiga quudinta, dalabku wuu burburaa. Kuma dhacayso aniga wax kale oo ka mid ah 120-ka liis ee aan haysto, markaa waxaa laga yaabaa inay dhibaato ku tahay qaab-dhismeedka quudinta.
Waan ka xumahay haddii aysan ahayn meel wanaagsan in wax laga sheego arrintan, laakiin waxay iga careysiineysaa inaan si raaxo leh uga akhriyi karin iDevice-kayga.
Ku jawaab ulysess
Fiiri gudaha boostadan ee golaha.
Quudkee ayaad raacdaa, https://blog.desdelinux.net/feed o http://feeds.feedburner.com/usemoslinux?
Labadoodaba. Sii wad fashilka. Waxaan u wareegay akhristaha quudinta kale ee loo yaqaan 'Reeder' ee iPhone-ka waxayna ku dhici doontaa iPad iyo OSX dhowaan.
Sidaan kuu sheegay xaaladihii hore, waxaa ugu wanaagsan inaad sameysid (html) sida ugu macquulsan, u isticmaal CDN sawirada iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin sida css, js, iwm.
Isticmaal memcache marka lagu daro apc. Taasna waxay si weyn u yareeyaan isticmaalka serverka.
APC waa waxa aan ku habeeyay VPS, oo lagu daray keydka goobta oo si toos ah ugu adeegta dhammaan html oo dhan (iyadoo laga fogaanayo wax badan oo ka shaqeynaya PHP)
Aad ayey u xun tahay marka loo eego wadaagista GnuTransfer aad ayey u xadidan tahay. Waxaan haystay fikradda ah inaan shaqaaleeyo qorshe si aan u arko sida wanaagsan ee uu blogku u shaqeynayo, laakiin waxay kaliya u oggolaanayaan 1 domain iyo 1 database dhammaan qaababka. 🙁
Aad u fiican. Sugitaanka boostada soo socota halkaasoo ay ku sharxi doonaan waxbadan oo ku saabsan GNUT gudbinta.
Ku jawaab nn
Waad ku mahadsantahay wadaagida khibradahaaga arintaan ku saabsan. aad u xiiso badan.
Jawaab José Torres
Waad ku mahadsan tahay akhriskaaga saaxiib.
Aad baad ugu mahadsantahay dadaalka weyn ee aad u gashay inaad qof walba la wadaagto. Waxaad 'xoogaa dildilaac' tahay.
Maya, mahadsanidiin waad na aqrisay 🙂
Oo sidee ku saabsan baloog guurto ah oo laga sameeyay miskaha iyo isticmaalka disqus ee faallooyinka? Aad spartan?
Fikrad kale: Varnish ...
Oo halkan waxaan la imid malaayiin Mahadsanid! 🙂
Waan taageersanahay talo soo jeedinta Oscar. U isticmaal CDN CSS, JS iyo Sawirro (Midda dambe oo keliya haddii ay suurogal tahay oo ammaan ah)
Wixii aan ka arko waxay isticmaalaan bootstrap iyo isku mid waxaan isku dayay serverka CDN. Waqtigan xaadirka ah Bootstrap ayaa loo cusbooneysiiyey nooca 3 oo aanan arag isbeddel weyn (wixii yar ee aan akhriyay), laakiin haddii ay xoogga saaraan ilaha, maaddaama ay siiyaan CDN ikhtiyaar weyn iyo in lagu daro astaamaha ikhtiyaar ahaan .. .
Ku jawaab Bruno
Waxaan isticmaali doonaa CDN (CloudFlare hadaanan qaldanayn) 😉
Waxyaabaha ku saabsan nooca cusub ee Bootstrap ... Waxaan u dhaafayaa in la sii faahfaahiyo, isagu waa midka daryeela naqshadeynta, waxaan daryeelaa adeegaha iyo adeegyada ...
Wanaagsan! Guullo markaa! goobta weli duulaya!
Waad ku mahadsantahay dib u eegista, waa kuwo aad waxtar u leh.
Ku jawaab gonzalezmd
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga 🙂
Ma aqaano sababta aad iiga tirtireyso haddii waxa kaliya ee aan doonayo ay tahay inaan wax ku biiriyo, isku xirka soo socda https://www.digitalocean.com/ Waxay umuuqataa mid kafiican tan aad isticmaasho, waxaan u maleynayaa, inay tahay soo jeedin, intaas waa intaas.
Sidaad u aragto, ma tirtirno, waxaa jira wax yar ka sarreeya. Waxay ku ekaatay dhex dhexaad maxaa yeelay nidaamku wuxuu moodayay inuu noqon karo spam. Runtuna waxay tahay inay yeelatay dhammaan muuqaalka spam, sidaa darteed aad uga taxaddar. Weli waad ku mahadsan tahay soo-galinta. 🙂
Go'aankan iyo caddeynta la isku halleyn karo ee GNUT gudbinta ayaa igu dhiirrigelisay inaan ku martigaliyo websaydhkayga GNUT gudbinta.
Waxaan sameyn doonaa qoraal aan kaga hadlayo GnuTransfer gaar ahaan 😉
Way fiicnaan lahayd in wax yar laga sheego waxa ku habboon ee goobta, wax la mid ah ku dhaqanka wanaagsan.
Waan taageersanahay mooshinka. Taasi haddii aan jeclaan lahaa inaan akhriyo.
ArpSpoofing iyo SSlstrip oo ficil ah.
Age of Pirates RPG Elite ee Android